Daawo Sawirada “ Dadka kunool Gobolka Crimea oo doortay in ay ku biiraan Dalka Ruushka « AYAAMO TV
Daawo Sawirada “ Dadka kunool Gobolka Crimea oo doortay in ay ku biiraan Dalka Ruushka by Maamule b 1 of 1
1074 Views Date March 17th, 2014 time 7:16 am
Dadka kunool Gobolka Crimea ayaa maalintii shalay waxa ay si aqlabiyad leh ugu codeeyeen in ay ka go’aan Dalka Ukrine kuna biiraan Dalweynah Rasahka oo hada ciidamo badan ay ka joogaan Gobolkaasi.
Waxaa Maalintii shalay afti loo qaaday Dadka kunool Gobolka Crimea in ay kasii mid ahadaan Ukrine ama ku biiraan Ruushka , waxaana Dadkii dhiibtay codkooda 95.5% ay u codeeyeen in ay ku biiraan Dalka Ruushka.
Isku soo baxyo waa weyn oo lagu taageerayo aftida ay Shacabka Crimea ugu codeeyeen in ay ku biiraan Dalka Ruushka ayaa ka dhacay qeybo badan oo kamid ah Gobolkaasi.
Hogaamiyaha Gobolka Crimea ayaa si weyn usoo dhaweeyay ku biiritaanka Dalweynaha Ruushka ,waxa uuna sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in dadka kunool Gobolka Crimea doortaan in ay ku biiraan Ruushka.
Dhinaca kale Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa soo dhaweeyay aftidii ka dhacday Gobolka Crimea , waxa uuna guul iyo bash bash u rajeeyay shacabka ku dhaqan Gobolka Crimea ee hada doortay in ay ku biiraan Dalka Ruushka.
Dowadaha Reer Galbeedka iyo Mareykanka ayaa si kulul u dhaleeceeyay aftida la sheegay in ay ka dhacday Gobolka Crimea, waxa ayna aftidaasi ku tilmaameen mid sharci daro ah uu ruushku gadaal ka riixayo.